I-loft enethezekile "Le Grenier d'Ysatis" - I-Airbnb
I-loft enethezekile "Le Grenier d'Ysatis"
Sorèze, Midi-Pyrénées, i-France
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Mas 15.
I-Loft engu-50m², esanda kulungiswa, ithokomele kakhulu futhi ikhanya, esitezi sesi-2 sendlu endala, egcwele uhlamvu, etholakala enhliziyweni yedolobhana elisohlwini, esitiladini esijwayelekile nesithule. Ikhishi elihlonyelwe, indawo yokuphumula enesikrini esiyisicaba, igumbi lokugezela elinobhavu ozimele, isimo somoya ...
Indlu inendawo yokuhlala yabanikazi (isitezi esingaphansi kanye nesitezi sokuqala) kanye nesitezi esisegumbini elidala le-attic / incekukazi esitezi sesi-2 enokufinyelela kwangasese. Kuyinto emazingeni 2: ephansi okuyingxenye kuhlanganisa emnyango / udla / ekhishini endaweni kanjalo ingxenye ephakeme kakhulu (0.70m ngaphezulu) izindlu ekamelweni elisophahleni, ivulekele egumbini lokuphumula / endaweni TV kanye yokugezela. I-loft yakhelwe ukuhlalisa abantu abangu-2. Umuntu owengeziwe (ingane noma osemusha) angafakwa ngokungezwa kombhede ogoqwayo. Siphinde sibe nombhede wezingane otholakalayo.
ubusuku obungu-7 e- Sorèze
4.95 · 210 okushiwo abanye
Indlu itholakala enhliziyweni yedolobhana, eduze kwazo zonke izitolo (umbhaki, indawo yokudlela, isitolo segrosa, njll.) kanye nase-Abbey-School of Sorèze, isikhumbuzo esiyingqopha-mlando esinesikhathi esidlule esihlonishwayo nesihlonishwa njengeGrand Site d'. Occitanie. Lezi zindlu zangaphambili ze-Benedictine abbey, phakathi kwezinye, i-Dom Robert Museum kanye ne-tapestry yekhulu lama-20. Ukutholwa kwasebusuku kwesayithi kuhlelwa ehlobo kanye nefestivali "Yomculo Wezibani" ngoJulayi;
Siyakwamukela nsuku zonke futhi sizohlala sikhona ngesikhathi sokuhlala kwakho ukuze sikwazise futhi ngangokunokwenzeka mayelana nezaphulelo zezivakashi kanye nomlando wendawo yakithi kanye nesifunda sethu, uma ufisa.
Hlola ezinye izinketho ezise- Sorèze namaphethelo